Ny fomba fampitomboana ny programa fanatanjahantena enti-mody - Method Makia
Ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena lehibe
Inona no tonga ao an-tsainao rehefa mahita na mandre ny teny hoe "fampirimana"?
Raha miady amin'ny fanontanianao raha ianao no mizaka izany androany na tsaratsara kokoa, dia tokony ho fantatrao fa tsy irery ianao. Ny fampakaram-bady matetika dia mahatsapa ho mendri-piderana, ary tsy misy ilana azy, ka tsy ampy ny olona amin'izany. Ny fahatsapana fihetseham-po toy izany taloha, dia nanao ezaka manokana izahay mba hanamafisana ny fampiofanana ny Method Makia, na ny Routine Prehabilitation rehefa miantso azy io, tena mahafinaritra na dia ny mpilalao mafana fo indrindra aza fa tsy hiraharaha fotsiny izany ny olona. Saingy alohan'ny handehanana lavitra, aoka isika hifantoka amin'ny fanontaniana fototra mifandraika amin'ny fiakaran'ny hafanana Inona no antony anaovana izany?
Alao sary an-tsaina hoe matory toy ny zazakely ianao. Tampoka teo, nitsahatra ireo jiro, ary misy olona iray mihintsana ny fivoahana amin'ny hetra aloanao mba hamenoana azy - mini unitank review. Avy eo, ary amin'ny fotoana iray, dia angatahana ianao hilaza ny toetr'andro ny toetr'andro, inona ny anaran'ny dadabe sy bebeny, ary manapaha hevitra hoe inona ny iray amin'ny fiantohana enina isan-karazany omena anao vonona hanaiky. Hanana izany daholo ve ianao? Toy izany koa no mitranga amin'ny vatanao raha toa ka manery azy hivoatra tsy misy fiandrasana mandroso. Vetivety dia tampoka ny vatanao ary mandefa hafatra ho an'ny atidohanao izy, saingy mitranga izany rehefa mihetsika. Ny sela tsirairay ao amin'ny vatanao dia miteny hoe "Ahoana?" Ny ampahany amin'ny vatanao dia mitsoka ireo fihenam-bidy, ny ampahany amin'ny panic, ary ny sisa dia hipoka fotsiny. Raha tsy mitebiteby tampoka ny adin-tsaina, nefa mbola mila mitombo ny vatanao, dia tsy manam-potoana hanatsarana ny fivoahan'ny orana ianao, ary ny fahatongavana dia haingana kokoa noho ny harerahana.
Eny tokoa, ny teny iray izay tsara kokoa noho ny fampirimina dia mitsangana. Ny karazana fanasongadinana tsara dia mahasambatra ny vatanao. Ny sela misitrika dia miomana amin'ny fifanarahana, ny fiasan'ny ra dia mahomby amin'ny fanesorana ny asidra, ny teboka manohana / fifandraisana dia vonona amin'ny fiatrehana ny adin-tsaina. Mirehitra ny jiro, ny vatanao dia mifoha ary miomana amin'ny asa feno.
Tena manan-danja tokoa ny manandratra ny rafi-pitabatabana, ny fiantohana, ary ny teboka manohana / mifandraika mba hahatongavana amin'ny toetry ny fahavononana. Izany dia miantoka ny fahombiazana sy ny fiarovana tsara indrindra. Voalaza fa ny tanjona lehibe indrindra dia ny manasitrana ny hozatra mba tsy hisorohana ny hozatra sy ny elany. Raha ny marina, ny vatana dia manasitrana ny hozatra tsara kokoa noho ny voina manimba sy ny teboka manohana / fifandraisana. Rehefa "matory" ny rafi-pitabatabana, dia mora kokoa amin'ny ratra ny hozonao, indrindra mandritra ny fampiofanana enti-mihetsika haingana. Marina fa zava-dehibe ny fanalefahana ny hozatrao mba hisorohana ny ratra sy hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fampiofanana anao. Zava-dehibe ny mihaino ny vatanao mba tsy ho "hatahotra" ny hozatry ny hozatry ny hozatra ary "hikotrika" alohan'ny fampiofanana dia efa nanomboka. Ny famporisihana ny fitohanana dia tsy maintsy atao ihany koa amin'ny voalohany, ary raha vao mitranga ny fiakaran'ny hafanana dia mety hipoitra amin'ny fampidirana ireo toerana faratampony. Ny hatsembohana dia tsara, fa ny fitsanganana mankany amin'ny fara-tampony dia tsy ilaina loatra amin'ny fampiharana ara-dalàna.
Arousal Routine amin'ny Method Makia
Alohan'ny hanombohan'ny tena fampiharana ny fomba fampiasana Methia Makia, dia misy fomba fanao mahavariana natao, ary manosika ny vatanao amin'ny fahazoana ny tena fampiasana Method Makia.
Noho izany inona no mahafinaritra indrindra momba an'i Prehab? Mazava ho azy fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fanarahana ny tanjona. Ny Prehab dia misy hetsika mahafinaritra, mahalasa ary mahomby izay manenika ny ampahany amin'ny vatanao manokana amin'ny fomba fijerin'ny fiofanana. Na dia izany aza, dia nijery kely ihany koa izahay. Ny fidiram-bolanay dia ny "squat" mahasalama mahasalama izay mahasoa ny lamosinao sy ny lohalika, ny fikolokoloana, ny elany ary ny fampiasana ny soroka izay manamafy ny vatanao amin'ny fahavononana hanao fihetsiketsehana bebe kokoa. Pikantsary tsara tarehy izay mora sy haingana amin'ny fanatanterahana ny lahatsary.